March 2022 - ပညာ ပါဝါ
admin . admin | 27/03/2022
တွေ့မြင်နေကျပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေနဲ့ မိမိုက်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ယုသန္တာတင်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ.. ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ…အပြုံးချိုချိုလေး နဲ့ အေးချမ်းတဲ့ မျက်နှာလေး ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မြင်လိုက်ရုံ နဲ့တင် အချစ်ပိုသွားရလောက်အောင်ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအလှနဲ့ ဖမ်းစားညို့ယူနိုင်တဲ့ မင်းသမီးလေးကတော့ ယုသန္တာတင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူမဟာ အနုပညာလောကမှာနေရာတစ်နေရာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရရှိထားပြီးတော့ ပရိသတ်တွေလည်း အခိုင်မာ ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ဘယ်လိုဇာတ်ကောင်မျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် သဘာဝကျကျ
admin . admin | 26/03/2022
သူမတောင် မသိလိုက်ဘဲ Fan Pages တွေဖွင့်ပြီးပြန်ရောင်းစားကာ ကိုယ်ကျိုးရှာနေသူတွေကို သတိပေးစကားဆိုလိုက်တဲ့ မေမီကိုကို… ပရိသတ်ကြီးရေ မေမီကိုကိုကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မေမီကိုကို ကတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ရိုက်ကူးသမျှဇာတ်လမ်းတွဲတွေတိုင်းကအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေခဲ့ပါသေး တယ်။ အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာချိန်မှာတော့ နာမည်ယူသုံးပြီး Page အတုတွေဖွင့်ကာ ပရိသတ်နဲ့ အထင်မြင်လွဲမှာအောင်လုပ်ခံရတာတွေကို အနုပညာရှင်တွေကြုံတွေ့နေကြရစမြဲပါ။
Boycott လုပ်ရမယ့်အစား ဆိုင်ကိုပါကြော်ငြာပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တခုကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ အပြင်းအထန် ဝေဖန်တာခံနေရတဲ့နန်းစုရတီစိုး.. ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့အဆိုတော်နန်းစုရတီစိုးကတော့အသံချိုချိုလေးနဲ့သီချင်းတွေကိုသီဆိုတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။နန်းစုကတော့ကပြားမလေးဖြစ်ပြီးဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့အရပ်ရှည်ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတာကြောင့်ပုရိသတွေအားပေးမှုလည်းရရှိနေတာပါ။ သူမကတော့အင်တာဗျုးတွေမေးတိုင်းမှာလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးလေးတွေနဲ့ ဖြေဆိုတတ်သူဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးကချစ်ခင်နေရသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ သူမကသီချင်းတွေဆိုတတ်ရုံမကဘဲ မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေမှာလည်း ကျရာနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…နန်းစုကတော့ကိုယ်ပိုင်အမ်ဘမ်တွေလည်းထွက်ရှိထားပြီးအောင်မြင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တစ်လောက်မှာတော့ သူမက အချစ်ရေးနဲ့ပက်သက်လို့တော့ သိုသိပ်နေပါတယ်နော်.. ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ချစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်မှုလေးတွေကိုတော့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ဖြစ်ဖြစ် Instagram မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တင်ပေးလာတတ်ပါတယ်နော်.. ဒီနေ့လေးမှာတော့
admin . admin | 25/03/2022
တစုံတယောက်နဲ့ တော်တော်လေးဆင်နေတဲ့ ချစ်သူ စစ်ဗိုလ်မှူးကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ ထင်ကြေးအမျိုးမျိုးပေးခံနေရတဲ့ အေးမြတ်သူ.. ပရိတ်သတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့ မမြတ်လေး လို့ ခေါ်ကြတဲ့ မင်းသမီးချော အေးမြတ်သူ ကတော့ ရယ်လိုက်ရင် ပါးချိုင့်လှလှလေးနဲ့ မြင်သူရင်ကို အေးချမ်းစေတဲ့ အလှပိုင်ရှင်လေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အေးမြတ်သူကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းက“ခေါက်ထီးလေးမလုံ့တလုံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ပို့ဆုကြီ းကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ လင်းမြတ်ရဲ့ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲလေးကို အချိန်မီရုံလေး ရောက်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ ခေးဆက်သွင်… ပရိသတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်ခေးဆက်သွင်ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုအပြည့်အဝရရှိခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ သရုပ်ဆောင်ခေးဆက်သွင်ကဇာတ်လမ်းတွဲတွေအပြင် ကြောငြာတွေလည်းဆက်တိုက်ရိုတ်ကူးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ခေးဆက်သွင်ကအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ခြားကနေ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်လင်းမြတ်ရဲ့မဂ်လာပွဲလေးကိုတတ်ရောက်ခဲ့တာဘဲဖစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ crd Zawgyi သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ လင္းျမတ္ရဲ႕ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲေလးကို အခ်ိန္မီ႐ုံေလး ေရာက္သြားခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကိုေျပာျပလာတဲ့ ေခးဆက္သြင္… ပရိသတ္ႀကီးေရသ႐ုပ္ေဆာင္ေခးဆက္သြင္ကေတာ့ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြမွာ အေကာင္းဆုံးသ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးပရိသတ္ေတြရဲ႕အားေပးမႈအျပည့္အဝရရွိခဲ့တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ေခးဆက္သြင္ကဇာတ္လမ္းတြဲေတြအျပင္ ေၾကာျငာေတြလည္းဆက္တိုက္႐ိုတ္ကူးေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ထီလာကန်မှာ ဖားကောက်ခဲ့ပါဆိုတဲ့သီချင်းကို အားရပါးရသီဆိုနေတဲ့ သမီးလေး ခင်လင်းထင်ရဲ့ ချစ်စရာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို တင်ပေးလာတဲ့ မေမေ ဒီးဒီ… စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့ သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တည်ထောင်ထားပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။စန္ဒီမြင့်လွင်က အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ကြားထဲကနေ သမီးလေး Treasureကိုလည်း သေချာဂရုစိုက် စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Treasureလေးကတော့ ဖေဖေ မေမေရဲ့ အသည်းနှလုံးလေးဖြစ်ပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရတဲ့
“လူတိုင်းမှာ အားနည်းချက်ရှိတယ်၊ ပုံမှန်လေးကြိုးစားပြီး ရပ်တည်ကြပါ၊အားငယ်နေရင် ထွက်ပေါက်မရှာပါနဲ့ “လို့ Single Mom တွေကို အားပေးစကားပြောလာတဲ့မေနွယ်ထွန်း…
admin . admin | 24/03/2022
“လူတိုင်းမှာ အားနည်းချက်ရှိတယ်၊ ပုံမှန်လေးကြိုးစားပြီး ရပ်တည်ကြပါ၊အားငယ်နေရင် ထွက်ပေါက်မရှာပါနဲ့ “လို့ Single Mom တွေကို အားပေးစကားပြောလာတဲ့မေနွယ်ထွန်း… သရုပ်‌ဆောင် မေနွယ်ထွန်း ဟာ MNTV ကထု တ်လွှင့်ပြသ တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အိမ်မက်များမိုးထားတဲ့အိမ် ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နာမည်ကြီးလူသိများလာခဲ့သူ ဖြစ် ပါတယ်။ သူမကတော့ Single Moth er
မြန်မာဝတ်စုံတွေနဲ့လည်း ကျက်သရေရှိရှိလှပနေပြန်တဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာရဲ့ပုံရိပ်လေးများ… သင်ဇာကတော့ အနုပညာလောကမှာ sexy ကျကျနဲ့ စွဲမက်စရာ အလှတရားတွေကြောင့် ပုရိသပရိသတ်တွေကြား အမြဲရေပန်းစားအောင်မြင်နေသူပါ ။ အချိုးအစားကျတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့လည်း မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကို အားကျချစ်ခင်စေသူလေး ဆိုလည်း မမှားပါဘူး ။ ပုရိသတွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုတွေကို အများဆုံးရရှိထားတဲ့ သင်ဇာလေးကတော့ ကျစ်လစ်သွယ်လျကာ ဆွဲဆောင်မှုတွေရှိလွန်းတဲ့ ပင်ကိုယ်အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် သူမတူတဲ့
မြေကွက်တွေကို အချိန်ခဏအတွင်းမှာပဲ သိန်း ခုနှစ်ထောင်ကျော်ဖိုးအထိရောင်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ အာဗြဲစိန်အတွက် ဂုဏ်ယူနေတဲ့ မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်… တစ်ချိန်ကအားပေးခဲ့ရတဲ့မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်ကတော့ စွယ်စုံရမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုဇာတ်ရုပ်မျိုးမှာမဆိုပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို ဒီနေ့အထိရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိမှာ မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်က အနုပညာအလုပ်အပြင် ဇနီးသည်ရဲ့ အလုပ်တွေကိုလည်း ဘေးနားက ကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် ။ နေမျိုးအောင်ရဲ့ ချစ်ဇနီးလေး အာဗြဲစိန်ကတော့ လိုင်းပေါ်မှာ မြေကွက်တွေနဲ့ အခြားတန်ဖိုးကြီးအရာတွေကို Live
အနုပညာအလုပ်တွေနားထားရတုန်းရှိတာလေး ထိုင်စားတာကုန်သွားပြီမို့ဝမ်းရေးအတွက် တက်စီလေးထွက်မောင်းနေတဲ့အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဇာတ်ပို့အောင်ဇော်မင်း… ဇာတ်ကားတစ်ကားရိုက်ပါက မင်းသား၊မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ အဓိကဇာတ်ဆောင်တွေဟာ အနုပညာကြေးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိကြပေမယ့် ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရန်သရုပ်ဆေ ာင်တွေကတော့ အ နုပညာကြေးအရ မ်းကို နည်းပါး ကြပါတယ်။ ဒါကြေ ာင့်လဲ စုဆေ ာင် းမိထားတာမရှိတာ ကြောင့် ဒီလိုကာလရော က် တဲ့အခါမှာတော့ ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့